Concerts Yemhuka- ICO Ruzivo uye Chiyero - ICO Chinyorwa Pamhepo
Yepasi Pose Konati Inotenderera
Isu tinogadzira makonzati makuru evatambi vepamusoro, munhandare uye kutenderera pamhepo kune vateereri vemamiriyoni pasi rese. Kupa simba indasitiri yemimhanzi kuti vagadzire matsva emari emari kuburikidza nemusika wedu wepamhepo uye cryptocurrency.
Nezve Animal Concerts
Nekudzikira kwekutengesa kwealbum, kuwedzera kwekushambadzira uye kushomeka kwekushanya kwekugona, mari yevaenzi yave kuderera zvakanyanya, asi vateveri vane nzara yekudyidzana uye vari kutsvaga hukama hwepedyo nevaimbi vavo vaanoda. Zviitiko pasi rese zviri kufamba online - kunyanya mugore rapfuura. Iyo megigi yeBelgian Tomorrowland yakaenda online mu2020 uye yakatengesa anopfuura 1 Miriyoni matikiti. Vanhu vakaita mapati mudzimba dzavo, vakakoka shamwari dzavo uye vakafararira senge ivo vaivapo. Izvi zvave kuita zvoruzhinji uye mukana pano wakakura. Animal Concerts kupatsanurwa kweVaraidzo Yevaraidzo Boka iyo inokoshesa pane yechinyakare konzati modhi uye ichichipa icho chitsva hupenyu kuburikidza nekubatanidza blockchain uye humwe hwedigital matekinoroji.
Tichagamuchira makonati ezita hombe mazita maartist uye tinoshambadzira online kune vangangoita vasina muganho pasi rose. Tiri kugadzira hova nyowani yemari hova yevaartist, uye nzira nyowani uye dzinonakidza dzekuti vateveri vadyidzane navo - kuunza maartist uye mafeni pamwechete tiri kugadzirisa dambudziko kubva kumativi ese. Tatova nezvibvumirano nemazita emhuri akati wandei.
- Kugadzira mikana mitsva yevaimbi yekudyidzana uye nekugadzira mari itsva kubva kuvateveri vavo vanonyanya kufarira.
- Isu tinogadzira A-Rondedzero maartist avo vanosimudzira maconcons edu kuvateveri vavo, vachifumura mamirioni kuchikuva chedu, musika uye chiratidzo.
- Concerts inoyerera paMetaverses kubva kune vatinoshanda navo vakaita seChipiri Hupenyu, Decentraland, Cryptovoxels, Sandbox & Somnium Space - vane vashandisi vanoshandisa mamirioni
- 360 ° makamera padanho rakabatanidzwa neVR headset inopa mavans chiitiko chakanyudza zvisina kumboitika kubva kunyaradzo yeimba yavo.
Inoshamisa Revenue Inogona
Isu tinogadzira makonzati ane mazita makuru maartist uye tobva tatengesa matikiti kune vangangoita asingagumi vateereri online. Vagadziri vakuru vanogona kazhinji kutengesa matikiti zviuru zana nemazana mashanu enzvimbo yekuitira nzvimbo muguta rimwe chete, kune vateereri vepasirese pasirese isu tinotarisira kutengesa 100,000 Miriyoni kana kupfuura - izvo zvakaratidzwa kare neBelgian festival TomorrowLand.
Pamwe chete nekutengesa matikiti, tinogona zvakare kugadzira mari munzvimbo dzinotevera:
- Kutengesa & NFT's
- Kudyidzana & Kukwidziridzwa
- Kushambadzira & Chiitiko Kutsigira
- Kushambadzira Ongororo Dhata kubva kumamirioni evateveri vakavimbika
Iyo Animal Coin ichave iri yedhijitari mari yematikiti, kushambadzira uye bhizinesi needu vatinoshanda navo, kugadzira chaiyo chiratidzo chiratidzo
Kuyera timu yedu yeBlockchain Nyanzvi
Kubhuka kweiyo yekutanga concert
Kugadzira kutanga kudyidzana- Shanduko, Vanyori, maConcerts & Sponsors
Pakutanga Presale Token Kugovaniswa Kwakavhurika kune Vakazvimirira Mari
Chiratidzo (Chinyoro) Kutanga Launch
Kutanga Makambani Ekutanga Ekushambadzira
Bhadhara Binance uye Coinbase Pro kunyora chiratidzo chedu
Wintermute Partner kune broker kuvhura pane 100+ Shanduko pazuva rekutanga
Scale Kushambadzira Campaigns
Kushambadzira Concepts kuburikidza neyakajairika midhiya
Nharaunda inovaka kuburikidza nekusimudzira kwemakonzati
Inobatanidza Brand inboarding
Onboard Music, Nzvimbo uye Tech Partners
Ronga zvigadzirwa zvemitsara, zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvemadhijitari
Bhuku 200+ Wepamusoro Tier muimbi kubva presale kusimudza
Animal Concerts Kiredhiti (hapana muripo pakutenga)
Shandisa Circle uye gadzira yedu yega chikwama
Gadzira yekutanga maKonzati
Fambisa makonzati kutenderera pasirese
Superbowl maitiro kushambadzira papuratifomu
Rondedzero pane ese ekuchinjana uye vaviri neakawanda madhijitari
Tenga kutsikisa uye copyright mvumo yemimhanzi
Muvambi uye Chief Executive Officer
Muvambi uye Chief Chigadzirwa Officer
Mutungamiriri weBlockchain Solutions
Dhairekita weReal Investment
Director wePlatform uye Kubatana
Mutungamiriri weNFT Innovation
ICO Main Kutengesa
Chiratidzo Kutengesa Yakaomarara Cap
Chiratidzo Kutengesa Soft Cap
Copyright © 2021 ICO Chinyorwa Pamhepo. All Rights Reserved.